စွဲခြင်းတွင် synaptic plasticity နှင့် striatal circuit function ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
Curr Opin Neurobiol ။ 2012 Jun;22(3):545-51. doi: 10.1016/j.conb.2011.09.009.
Grueter BA ဘွဲ့, Rothwell PE, Malenka RC.
နန်စီ Pritzker ဓာတ်ခွဲခန်း, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံဌာန, ဆေးပညာ၏စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, Palo Alto, CA 94305, အမေရိကန်။
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုဖြစ်စေတူတဲ့သို့မဟုတ် Synaptic plasticity ၏ induction နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည့်အတွက် striatal ရှုပ်ထွေးအတွင်း Synaptic function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကား Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သည့်နျူကလိယ accumbens ပြောင်းလဲမှုများ (NAc), မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်များအတွက်အရေးကြီးသောတစ် ventral striatal မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအဖြစ်လေ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါဖြစ်သော dorsal striatum, ပါဝင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကြာရှည်ဖြစ်သကဲ့သို့, အတွက် Vivo မူးယစ်ဆေးဝါးအတှေ့အကွုံအားဖြင့်သွေးဆောင် striatal ဆားကစ်အတွက်မြဲအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေးပါမှုသည်။ အဆိုပါ striatum အတွင်းမှာပဲအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာပြုပြင်မွမ်းမံသွေးဆောင်ပြပြီ, အချိုမှု receptors (iGluR) နှင့် Synaptic plasticity ၏ induction ionotropic ။ striatal circuit ကို function ကိုတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအခြေခံအသေးစိတ်မော်လီကျူးယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများရောဂါဗေဒအပြုအမူထုတ်လုပ်ရန်ပုံမှန်သင်ယူမှုယန္တရားများလုဘယ်လောက်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးရေး, တိုးတက်မှု, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ဇွဲအဆိုပါ striatum နှင့်ဆက်စပ် Basal ganglia ဆားကစ်အတွင်း Synaptic ဂီယာအတွက်ပြောင်းလဲနေသောပွောငျးလဲပါဝင်မှထင်နေကြသည်။ ဤအဒေသများတွင် synapses aberrantly စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်စေ့စပ်ခံရဖို့ပေါ်လာသည့်ရေရှည် Synaptic plasticity အမျိုးမျိုးပုံစံများ, ပြ။ plasticity ဤပုံစံများ Synaptic ဆက်သွယ်မှု၏အားကောင်း, ဒါမှမဟုတ်ရေရှည်အလားအလာ (LTP), အဖြစ်က၎င်း၏အားနည်း, ဒါမှမဟုတ်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (, LTD) တို့ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကား Synaptic အပြောင်းအလဲများမကြာခဏ AMPA receptors (AMPARs) နှင့် NMDA receptors (NMDARs) အပါအဝင် iGluRs ၏နံပါတ်နှင့် function ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြပါ။ ထို့ကွောငျ့စွဲ related အပြုအမူတွေ၏အရေးကြီးသောကဏ္ဍများအခြေခံသော striatal circuitry အတွက် Synaptic plasticity ၏ယန္တရားများ elucidate ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။
striatal Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း၏ဧရိယာ၌မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရှင်းလင်းခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အများအပြားပေါ်ထွက်လာခေတ်ရေစီးကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြကြပြီ။ ချဉ်းကပ်မှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အားစူးရှသောနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲနှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းထိတွေ့မှု, ဆုတ်ခွာ / မျိုးသုဉ်းခြင်း, Re-ထိတွေ့မှု / reinstatement (ပုံ 1) အောက်ပါတို့သည် NAc အတွက် Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏အချိန်သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်. convergence သက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။ သို့သော်ကျနော်တို့ပဲလေ့မူးယစ်ဆေး-ရှာနှငျ့ပတျသကျသောစွဲလမ်း၏နှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့်များအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်သော dorsal striatal ငျဒသေအတွက် Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်နားလည်ရန်စတင်နေကြသည်။ သုတေသန၏အတိတ်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းအလွန်ကြီး Synaptic အဆိုပါ striatum ၏တိကျသောအာရုံခံလူဦးရေအတွက် plasticity, တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏အထူး MSNs နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတွင်ဤအထူးသဖြင့်ဆဲလ်အမျိုးအစားများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုချီတက်ခဲ့ကြသည်။ စွဲလမ်း၏လက်တွေ့ကုသမှုအရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုပြဿနာများ၏တဦးတည်း - အရေးပါတဲ့နောက်ခြေလှမ်း reinstatement နှင့် relapse ၏မော်ဒယ်များဤချဉ်းကပ်မှုချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ optogenetic နည်းစနစ်ဟာ striatum မှကွဲပြားခြားနားသောသွင်းအားစု၏ function ကိုခွဲစိတ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေရာ၌ခန့်ထားပြီ
ဤအထူးထူးအပြားပြားသွင်းအားစုကဖွဲ့စည်း synapses differential အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် modulated စေခြင်းငှါဘယ်လိုအလင်းသင့်ကြောင်းတစ်ခုချဉ်းကပ်။ နိဂုံးချုပ်မှာ striatal ရှုပ်ထွေးသောအပြည့်အဝလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုအခြေခံသောဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်ယန္တရားများ, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲနားလည်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီတွင် neuron လမ်းကြောင်း၏အဆင့်မှာ၎င်း၏ function ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆန်းစစ်ရပါမည်။